Mark Gurman anosimbisa runyerekupe nezve iyo iPhone 7 | IPhone nhau
Mark Gurman anosimbisa runyerekupe nezve iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus: mbiri kamera uye bhatani idzva repamba
Pese pane runyerekupe nezvake iPhone 7 uye iPhone 7 Uyezve izvo zvandakaverenga pane imwe yandisati ndambove nechinhu chakajeka. Kusvika nhasi. Runyerekupe rwandiri kutaura nezvarwo ndirwo runovimbisa kuti anotevera Apple mafoni emagetsi achave ne kumanikidza kwekutanga bhatani uye zvaive zvisina kujekerwa kwandiri nekuti mukudonha kwatakaona zvinoita sekunge bhatani iri rakafanana neiro ratinaro mumamodheru aripo. Asi Maka Gurman atumira chinyorwa muBloomberg icho chinosanganisirawo mukana uyu.
Kuti ruzivo urwu rwakaburitswa naGurman atove makuru mazwi. Iye wekare-mupepeti we9to5mac anga achizivisa akawanda zvakavanzika zveApple kwemakore, sekuuya kweiyo iPad uye akawanda matsva maficha muapuro software. Mupepeti mutsva weBloomberg anoziva vanhu vazhinji padhuze neApple uye neruzivo rwaanoparadzira kazhinji runopedzisira rwave rwechokwadi. Saka tenda Mark Gurman inova iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
1 Iyo yakasimba poindi yeiyo iPhone 7 Plus ichave kamera yayo
2 Dhinda bhatani rinotanga bhatani
3 Hapana chiteshi chefoni
4 Zvimwe zvinhu zvakasimbiswa
Iyo yakasimba poindi yeiyo iPhone 7 Plus ichave kamera yayo
Yakanga iri imwe yemakuhwa ekutanga kutenderera nezve iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Dambudziko apa nderekuti iyo yemhando yepamusoro kamera ichave iripo chete pane yakakura iPhone 7ndiko kuti, pane iyo iPhone 7 Plus. Mifananidzo yeiyo 5.5-inch modhi ichave yakajeka uye ichipa zvirinani ruzivo. Ma sensors ese ari maviri achatora pikicha panguva imwe chete uye mifananidzo iyi ichasanganiswa kuita imwe ichipa mhando yepamusoro.
Kwayedza yaGurman, iyo yakaedza system iyi, inoti iyo mapikicha anovandudza zvakanyanya mumamiriro epasi ekuzeya. Kune rimwe divi, kusanganiswa kwemifananidzo yemasaenzi maviri kunotibvumira kuti tiswededze tichichengetedza kujekesa.
Dhinda bhatani rinotanga bhatani
Kunyangwe pasina chinhu chakataurwa kuti bhatani nyowani rakatsetseka, sezvaungaona mumufananidzo wepfungwa yapfuura, rinotaura kuti richava rinobata. Iwo mabhatani aripo mune ese mamodheru kusvika kuiyo iPhone 6s anga ari echimakanika, ndiko kuti, kuvadzvanya isu tinofanirwa kuvanyudza, izvo kunyangwe hazvo chokwadi chekuti Kubata ID kunogona kunzwa patinoisa chigunwe pairi. Iyo nyowani modhi inoshandisa sisitimu yakafanana neiyo yeTrackpad yeMacBook nyowani: haizonyure, asi kusiyanisa pakati pekumanikidzwa kwakasiyana uye ichapa mhinduro yemuviri. Chero ani ane iyo iPhone 6s / Plus anogona kufungidzira kuti zvichange zvakaita sei nekuda kweiyo 3D Kubata.
Hapana chiteshi chefoni
Ini ndinofunga ichi ndicho chakaipisisa chekuti Gurman yaizosimbisa zvakadii. Pano ini handisi kuzoenda kunoongorora kuti zviri nani here kana kuti zvakanyanya kuve nechimwe chiteshi kana chimwe, asi zvinoita sekunge kusanzwisisika kufamba kwekusakwanisa kushandisa Mheni mahedhifoni uye kuchaja iyo iPhone panguva imwe chete. Iyo Bloomberg Mhariri haitauri chero chinhu pamusoro pechaji isina waya kana neyakaiswa, saka kana tikatenga iyo iPhone 7, isu tichafanirwa kubata nepatinogona.
Chichava chakanaka ndechekuti pachave nemutauri wechipiri. Icho chinhu.
Zvimwe zvinhu zvakasimbiswa
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro, Gurman anoti zvakare:
Mitsetse yeiyo antenna ichaenda kumusoro uye kuzasi micheto.
Dhizaini yacho inenge iri chaiyo kune iyo yakapihwa muna2014 neiyo iPhone 6 uye muna2015 neiyo iPhone 6s, asi zvakare inoti pachave neshanduko dzinooneka.
Saizi yemasikirini icharamba iri 4.7 uye 5.5 inches.
Ivo vanozoshandisa iOS 10 (Doh!).
Izvo zvaasinga taure nezvazvo, chimwe chinhu chaasati amboita, ndiwo mutengo uyo iwo maviri michina achave nawo. Chinhu chakanaka ndechekuti hazvireve nezve iyo iPhone 7 Pro futi, saka kuchangosara mamodheru maviri chete. Izvo zvazviri, tinogona kufunga kuti mitengo ichafanana neiyo iPhone 6s uye kuti hatizobhadhare nezve € 100 yakawanda yemhando yepamusoro. Uye haataure nezve simba rekuchengetera mafoni eApple matsva, asi runyerekupe runoti Apple ichakanganwa nezve 16GB uye ichapa se 32GB yekuisa modhi. Kana runyerekupe rukasimbiswa, anotevera mamodheru achave ari 64GB (kana 128) uye 256GB. Izvi zvinoramba zvisina kujeka uye iyo 256GB modhi inogona kungowanikwa chete yeiyo Plus modhi.
Izvo zvakare hazvitaure chero chinhu nezve RAM, asi runyerekupe runoti iyo iPhone 7 ichave iine 2GB ye RAM uye iyo iPhone 7 Plus ichave iine 3GB ye RAM. Semazuva ese, kuti tibve mukukahadzika isu tichafanira kuramba takamirira asi, mushure mekuverenga Gurman, ini ndatova nevashoma vasara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mark Gurman anosimbisa runyerekupe nezve iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus: mbiri kamera uye bhatani idzva repamba
Chinyorwa chakanaka, ini ndanga ndamboverenga nezve gurman pane mamwe masaiti asi iwe unozvitaura sezvazviri, pasina iphone pro uye pasina kusanganisa makuhwa uye runyerekupe, tiri kutarisira mazuva apfuura uye nekuona mharidzo, ndine chokwadi padanho re software ipapo ichave yakati wandei kubhomba uye kugadzirisa mune ese mativi kuchaita kuti ive yakanakisa smartphone nhasi.
Pindura kuna silu4
Zvakanaka, ngatimirirei nekuti izvozvi ndinoronga kuchengeta yangu matanhatu, zvakanaka kwazvo kuve nekamera iri nani uye nekuwedzera kumhanyisa mhanyisa asi kana chinhu chikagara chiripo uye zvishoma zvacho hazvina kukodzera kutenga.
Ndechipi chinetso cheApple chekusaisa makamera akanaka, zvirinani skrini (2k), yakawanda ndangariro, kumidziyo yavo?!?! Icho hachisi chinhu kunze kwekushambadzira?
IOS 5 Clown Nokusingaperi akadaro
Chero bedzi paine ma fanboys anotenga, chero chavanotora, ivo vacharamba vachidaro. Kusvika vanhu vaneta. Chisingaregererwe kuti uve nekamera iri nani unofanirwa kutenga iyo Plus modhi, inova yakakura kune iyo skrini uye vazhinji vedu hatidi zvakadaro.
Pindura IOS 5 Clown Nokusingaperi
Iwo ekutanga mamaboards eiyo iPhone 7 anotanga kuoneka
KGI: Iyo Apple Watch 2 ichasvika gore rino ine GPS uye barometer